Jowhar.com : Somali Leader News - News: Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta
April 23 2014 08:53:42
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh oo la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta gaaray magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa la kulmay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta Labada madaxweyne ayaa ka wadahadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya. Safiirka dalka Soomaaliya ugaga wakiil ah dalka Kenya Maxamed Cali Ameeriko ayaa u sheegay idaacada VOA laanteeda afka Soomaaliga in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in la joojiyo qabqabashada dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya. �Labada hogaamiye waxa ay ku heshiiyeen in dadka xirxiran ee maalmihii la soo dhaafay lagu qabqabtay magaalada Nairobi baaritaan lagu sameeyo isla markaana wixii sharci leh la sii daayo wixii aan sharci lahayn Soomaali ahna lagu wareejiyo dowlada Soomaaliya.�ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya. Safiirka ayaa sheegay in dad ku dhow boqol ruux ay weli ku jiraan xabsiyada dalka Kenya isla markaana uu rajaynayo in la sii deyn doono dhowaan.
Dadaal diblumaasiyeed ayay dowlada Federalka u gashay sidii wax loogaga qaban lahaa xiisada ka dhalaytay qaraxyo ka dhacay dhowaan magaalada Nairobi,
Sidoo kale xildhibaanada Soomaalida ah ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya waxa ay kala hadleen dowlada Kenya sidii aan loo bartilmaameedsan lahayn dadka Soomaalida ah. Dowlada Kenya ayaa oggolaatay in lagu diro ciidamada Booliska dad Soomaali ah gaar ahaan xaafada Islii.
mahad on April 05 2014
0 Comments · 2289 Reads
Jowhar.com724,156 unique visits